हजुरको आजको दिन, २०७८ वैशाख १९ गते, आइतवार, २ मे २०२१ – bampijhyala.com
Home > आजको राशिफल > हजुरको आजको दिन, २०७८ वैशाख १९ गते, आइतवार, २ मे २०२१
हजुरको आजको दिन, २०७८ वैशाख १९ गते, आइतवार, २ मे २०२१
१९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:५३ bampijhyala
वादविवादमा अलमलिनुपर्दा काममा बाधा पुग्नेछ। ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले सताउन सक्छन्। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। वादविवादबाट जोगिँदै समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। बाहिरी स्रोत जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ भने द्वेष गर्नेहरूले हार खानेछन्। मिहिनेतले उपलब्धि दिलाउनेछ।
प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि मिहिनेतले उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहाेला।विभिन्न अवसरले सफलताको यश पनि दिलाउन सक्छ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो योजना अघि बढ्नेछ। कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। नियमित काम बने पनि आफ्नै सहयोगीहरू काममा बाधक बन्न सक्छन्।
आफन्तसँग भेटघाट हुनाले परिवेश उल्लासमय रहनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ। रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। तर काममा प्रतिस्पर्धी बढ्नेछन् भने सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। अरूको विषयमा चासो राख्दा दु:ख पाइनेछ। तापनि रमाइलो जमघटका बीच भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ।
श्रम परे पनि लगनशीलताले उपलब्धि दिलाउनेछ। भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। पुरुषार्थी काम गर्दै लाभ उठाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सहयोगीहरूले राम्रो फाइदा दिलाउनेछन्। भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ।
अमेरिकाले एक अर्ब ३० लाख कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सहयोग प्रदान गर्ने
आज साँझ ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:५३
सम्झनामा जेठ ३ १९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:५३
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:५३
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:५३
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:५३